धुमधामसंग विवाह गरेर श्रीमान् मलेसिया गए, ससुरालीले नै छोरीको विवाह फेरि अर्कैसंग गरिदिए (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > धुमधामसंग विवाह गरेर श्रीमान् मलेसिया गए, ससुरालीले नै छोरीको विवाह फेरि अर्कैसंग गरिदिए (भिडियो हेर्नुस्)
admin November 11, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाडौ । धुमधामसंग विवाह गरेर पैसा कमाउन भन्दै विदेश गएका एक पुरुषका श्रीमतिलाई ससुरालीले धुमधामसंग फेरी अर्कैसंग विवाह गरिदिए । रुपन्देहीको भैरहवामा यस्तो घटना भएको हो । उनी मलेसिया गएपछि श्रीमतिलाई विदेशवाट पैसा पठाउँथे । ससुरालीको घर पनि उनले नै बनाइदिएको बताउँछन् । म मलेसिया गएपछि श्रीमति माइत गएर बसिन्, ससुरालीले घर बनाउँदै थिए । त्यसका लागि पनि मैले मलेसियावाट पैसा पठाए ।
तर घर बनाएर सकेपछि श्रीमतिलाई ससुरालीले नै छोरीको विवाह अर्कैसंग गरिदिए । रविन कुमार विश्वकर्मा अहिले नेपाल फर्किएका छन् । रविनले मलेसियावाट नेपाल फर्केपछि पनि प्रहरीकहाँ आफु अन्यायमा परे भनेर पुगेको भएपनि प्रहरीले न्याय नदिएको बताएका छन् । त्यसपछि उनी अहिले मिडियामा सो घटना सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तीन वर्ष अघि मन्दिरमा गएर गैडाकोट नगरपालिका धारापानीकी युवतीसंग विवाह गरेको बताएका छन् ।
विवाह पछि उनले पढाई छोडेर सिलाई सिक्न भनेर माइत बसेको उनको भनाई छ । मलेसियावाट आएपछि श्रीमति लिन जाँदा ससुरालीले छोरी पठाएनन् । उनले ससुराकै नाममा पैसा पठाएको रसिद पनि प्रमाणका रुपमा राखेका छन् ।
श्रीमतिको गोर्खामा रहेको केटासंग प्रेम भएको र घर सल्लाहमै विवाह गराईदिएको आफुले थाहा पाएको बताएका छन् । श्रीमतिले विवाहमा आफुले दिएको गहना, ससुरालीको घर बनाउन भन्दै दिएको पैसा केही पनि फिर्ता नदिएको बताएका छन् ।
श्रीमतिलाई माइतमै बसेको भएपनि मलेसियावाट खर्चका लागि भनेर पैसा पठाएको बताएका छन् । मलेसियामा हुँदा फोनमा हरेक दिन कुरा समेत हुने गरेको बताएका छन् । त्यतीबेला भने श्रीमतिले त्यस्तो नराम्रो कुरा केही नगरेको बताएका छन् । गएको मंसिरमा विवाह भएको थाहा पाएको र फेसवुकमा आफ्नै श्रीमतिको अर्कैसंग विवाह भएको फोटो पनि देखेको बताएका छन् ।
‘तेस्रोलिंगी महिला’ को रुपमा नागरीकता लिन ५-६ लाख खर्च गर्नुपर्ने ( भिडियो हेर्नुहोस)
६१ बर्षको उमेरमा भोजभतेर सहित बिबाह, यो हेर्नुस बिहेमा यस्तो देखिए बेहुला बेहुली(फोटो फिचर)
पूर्वयुवाराज तथा युवराज्ञी हिमानीकी जेठी छोरी पूर्णिकाले ड्रिम ब्याय भेटिसके भनेपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
दुई वर्ष अगाडि बेपत्ता भएकि महिला समुद्रको बिचमा जीवितै भेटिइन्, यसरी गरियो उद्दार (भिडियो हेर्नुस्)
मन सम्हालेर हेर्नुहोस बा’ध्य’ताले खाँडी देशमा पुगेकी नेपाली चेलीको द’र्द’नाक जिवनी! (भिडियो)
माया हुँदाहँदैपनि सलमान र कैटरीना एक हुन नसक्नुको कारण बाहिरियो यस्तो रहस्य!
०७७ साल मंसिर १७ गते बुधबार, हेर्नुहाेस तपाइँकाे राशिफल अनुसारकाे भाग्य!
श्रीमान्‌सँग छुट्टिन आफ्नै घरमा चोरीको नाटक
बृद्ध आमाबुवालाई आँशुको आहालमा डुबाएर बिदा भए, श्रीमति मुर्छित, टुहुरा भए छोराछोरी
बाटोमा भेटियो २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ